यी नेताहरूका लागि ‘काल’ बन्यो पार्टी एकता, फ्लप हुदै राजनीति !::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यी नेताहरूका लागि ‘काल’ बन्यो पार्टी एकता, फ्लप हुदै राजनीति !
काठमाडौं – भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण सकेर फिर्ता भएको एक हप्ता नबित्दै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकीकरणको घोषणा गर्ने सहमति गरेका छन् । पार्टी एकीकरण भयो भने तीन दर्जन बढी अल्छी नेताहरुको राजनीति समाप्त हुनेछ । विशेष गरेर माओवादीका धेरै नेताहरुको राजनीति सकिनेछ ।
आफ्नो गृह जिल्ला रोल्पाबाट विस्थापित भएका सभामुख कृष्णबहादुर महराको राजनीति ओरालो लाग्नेछ । प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन र ओनसरी घर्तीका कारण रोल्पाबाट विस्थापित भएका महरालाई सबैभन्दा ठूलो घाटा लाग्नेछ । महरालाई धेरैले मन पराउँदैनन् ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, टोपबहादुर रायमाझी, रामबहादुर थापा, मणि थापा, दीनानाथ शर्मा, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, शक्ति बस्नेत, गिरिराजमणि पोखरेल सहितका झण्डै दुई दर्जन प्रभावशाली नेताहरु नयाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा ओझेलमा पर्ने स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी एकीकरणका बेला श्रेष्ठले महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनेछन् । तर, उनको रवैया र कार्यशैली कसैले रुचाउँदैनन् ।
श्रेष्ठ जनाधार नभएका नेताका रुपमा परिचित छन् । रायमाझीको पनि नयाँ पार्टीमा राजनीतिक भविष्य छैन । किनभने प्रदेश ५ मा एमालेका विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्टसहितका दिग्गज नेताहरुका कारण रायमाझीको राजनीति संकटमा पर्ने भएको हो । रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल र देव गुरुङलाई माओवादीभित्रै मन पराउँदैनन् । एमालेसँग पार्टी एकीकरण भयो भने यी नेताहरुको विचल्ली हुने देखिन्छ ।
उता, एमालेमा पनि झण्डै दुई दर्जन नेताहरु आफ्नो भविष्यको राजनीतिलाई लिएर चिन्तामा डुबेका छन् । स्रोतका अनुसार झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, महासचिव ईश्वर पोखरेल, स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेल, अमृत बोहरा, प्रकाश ज्वालासहितका नेताहरुपनि चिन्तामा पर्न थालेका छन् । अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका महासचिव पोखरेलको सपना पार्टी एकीकरणसँगै चकनाचुर हुनेछ ।
कृष्णबहादुर महराका कारण प्रदेशमा निर्वाचन लडेर प्रदेश ५ को मुख्यमन्त्री बनेका शंकर पोखरेलको पनि राजनीतिक यात्रा संकटमा पर्नेछ । पोखरेलले आफ्ना घर रहेको क्षेत्रमा कहिल्यै पनि निर्वाचनमा जित्न सकेका छैनन् । यस पटक अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर निर्वाचत भएका हुन् ।